Siphinde futhi sonyaka wesikole waminyaka yonke, kunesisho esithi "esikoleni phezulu, kukhona i-Yong ekahle" ~ wonke umfundi unamaphupho akhe, wonke umfundi unezikhathi eziningi noma ezingaphansi zesikhathi sabo sabafundi zigcwele izinkumbulo. Ngaleso sikhathi , sakhomba izintaba, saphefumlela umbhalo, noma sijabulela ubusha, umjuluko, ujabule kakhulu.
Ukusebenza kwezindleko eziphakeme kuwukubusa kwezinsuku zabafundi, namuhla ngikuthatha ukuthi uthathe isitoko sezinto ezimbalwa eziphakeme ezisebenzayo “ibhayisekili labafundi”.
[S160, ama-hormone wesigqi]
Umbala ogqamile wokuqhathanisa imibala, ukuma okumangalisayo, ukugibela uyingane enhle kunazo zonke ekhampasi
[S210: ngomqondo womhlaba, ukuphupha ekhaya]
Lokhu okuthiwa kufundwe izincwadi eziyizinkulungwane eziyishumi, ukuhamba amamayela ayizinkulungwane eziyishumi.Inhliziyo encane ihlala ingaphumuli, umhlaba muhle kakhulu, lapho inhliziyo ibanga!
I-S201, ifreyimu ye-aluminium alloy yokukulethela isipiliyoni sokugibela esimnandi ngokwengeziwe.Ukukhanya + kwemoto = ukunqoba umhlaba! Kukhona futhi izindlela ezingama-24 ′ nezama-26 ′ zokuba ukugibela kwebhayisekili yabantu abasha!
[S310, indlela yakho yokuthuthuka]
Ngabe izitayela ezimbili ezingenhla zehlulekile ukukuhlaba umxhwele? Ungalokothi unake, woza ubone u-S310!
U-S310 uhlanganise izinzuzo zezimoto ezimbili ezingenhla, zombili ubusha obuhle, nokukhanya kwe-aluminium body.Oh, nokusebenza okuhle kakhulu
I-Shimano chungechunge lwejubane elishintshashintshayo olune-500 kit nekhadi lesigubhu sekhadi, ukuma okunembe kakhudlwana, isivinini sokuguquguquka okusamanzana, kukuvumela ukujabulele ukugibela!
[isikhulu esincane esizolile S610]
Uma ugcinelwe isitatimende futhi ungafuni ukwenza isitatimende, khona-ke i-S610 ithikithi lakho.Ngokuzithanda wena, i-S610 iyindlela ephezulu yokunethezeka, ephakeme futhi enezinkomba eziphansi ezinencazelo.
Lonely "amagama amabili avulekele ukubona, kunezingane, kunezithelo kanye namakhabe, kunegxolo lezinja, kukhona izinambuzane ezindizayo.Umuntu othulile, inhliziyo inamandla angenamkhawulo, othanda uS610 angahamba nawe ukuze ukhule buthule.
[S620: ukhetho olukhulu olungabizi kakhulu]
Ekugcineni, ukunikelwa kwemikhiqizo yethu yasekhaya: S620! Umbala wokuqina wemibala, bonisa ukunambitheka kwakho okungajwayelekile; I-suite yokusebenza ishiya umhlaba esithunzini esindizayo.
I-24 shimano suti, i-aluminium alloy mehendi disc brake, ingakwazi ukukhiya imfoloko, ngomoya wesigubhu sezimbali se-bailin, vumela umiselwe ukuba ngumholi.
Ekugcineni, ngiphinda ngifisela wena iphupho lehhashi, nomaphi lapho ungathola khona!
Izingane Ibhalansi Bike , I-Mountain Bike Evela EChina , Bikey Mountain Bike , Isikebhe Samafutha Esikebhe Sentaba i-Fat Tire , I-Hot Mountain Bike , I-Mountain Bike ,